Nanangana Fisotroana Kafe Sy Fisakafoana Ho An’ny Tanora Tsy Manan-kialofana Ilay Ankizy Mpirenireny Teny An-dalamben’ny Mumbai Teo Aloha · Global Voices teny Malagasy
Nanangana Fisotroana Kafe Sy Fisakafoana Ho An'ny Tanora Tsy Manan-kialofana Ilay Ankizy Mpirenireny Teny An-dalamben'ny Mumbai Teo Aloha
Voadika ny 17 Septambra 2016 16:07 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Ελληνικά, မြန်မာ, عربي, русский, Français, Română , 日本語, English
Ny tantaran'i Amin Sheikh, izay mikasa ny hanova ny fiainan'ny zazalahy mitovy aminy niha-lehibe teny an-dalamben'ny Bombay. Sary natolotry ny: Humans of Bombay
Hitan'ilay mpanoratra Amin Sheikh ho nody ventiny ny rano natsakaina tamin'ny asa mafy nataony rehefa avy nivarotra ny bokin'ny tantaram-piainany nandritra ny telo taona teny an-dalamben'ny Mumbai izy. Naha-tanteraka ny nofinofiny hatry ny ela amin'ny hananganany fisotroana kafe sady fisakafoanana ao an-drenivohitra ara-bolan'i India ho an'ny ankizy mahantra eny an-dalambe ihany izy.
Niaina zavatra maro i Sheikh, 36 taona, nandritra ny fotoana fohy niainany. Teraka tao amin'ny fianakaviana mahantra tany amin'ny faritra iva any avaratr'i Mumbai izy ( nantsoina hoe Bombay ilay toerana tamin'izany fotoana izany ) . Ho azy, nanomboka teo amin'ny faha-dimy taona ny fiainana rehefa nanomboka niasa tao amin'ny fivarotana dite iray izy. Tamin'ny faha 16 taonany, niaina teny an-dalambe toerana be korontana tao Mumbai amin'ny maha-ankizy tsy manan-kialofana azy izy ary efa niaina tamin'ny fanangona-pako, nihira tany anaty lamasinina, nangataka ary nitsimpona vorodamba, nanao mpikarama tao amina orinasa, nivarotra tany anaty fiaran-dalamby, nanadio kiraro sy nanao asa maro hafa talohan'ny nanavotan'ny trano fitaizana zaza kamboty azy atao hoe Sneha Sadan tao Mumbai. Nanome azy fonenana vaovao ireo ary nanova ny fiainany.
Nalefa hiasa ho an'i Eustace Fernandes mpanakanto malaza i Sheikh tamin'izy 17 taona .Niasa ho mpamily, mpahandro ary mpanadio izy ary nianatra teny anglisy nandritra izany fotoana izany. Niaraka tamin'ny fanampian'i Eustace ,nanomboka ny orinasany fikarakarana dia azy manokana antsoina hoe Sneha Travels i Sheikh tamin'ny 2002. Nitondra azy ho any Barcelona indray mandeha mihitsy aza i Eustace, ary tany izy no nitsidika ny trano fisotroana kafe sady fisakafoana vitsivitsy izay nahazoany aingam-panahy.
Mpiasa ao amin'ny fisotroana kafe an'i Amin Sheikh, izay manana ekipa ankizy mpirenireny teny an-dalambe teo aloha avy ao Sneha Sadan. Sary nahazoana alàlana
Ankehitriny, miloko isan-karazany fotsy sy volom-boasary ny fisotroana kafe an'i Sheikh Bombay to Barcelona ary ankizy mpirenireny teny an-dalambe maro teo aloha avy any Sneha Sadan no mpiasany. Ny fisotroana kafe, izay nisokatra tamin'ny tapaky ny volana Aogositra tamin'ity taona ity, dia maniry hisokatra ho an'ny olona avy amin'ny sarangam-piainana isan-karazany ary noho izany natao amin'ny vidiny mirary ny sakafo misy, Ohatra, 10 ropia (0.15 dolara ) monja ny dite iray kaopy, izay mitovy amin'ireo dite eny amoron-dalana ihany .Ny teny filamatr'i Sheikh dia ny hoe: “Mendrika ny handeha any amin'ny toerana tsara hisotro kafe na dite ny olona rehetra”.
Tombanana ho 37.059 ny ankizy miaina eny an-dalambe ao Mumbai, araka ny fanisam-bahoaka nataon'ny Ivontoerana Tata Misahana ny Siansa Sosialy sy ny fikambanana an-tsitrapo Action Aid India. Roa amin'ny dimy no efa niharan'ny fanararaotana ara-batana, ara-nofo ,am-bava na noterena ho faty mosary tamin'ny fotoana sasany teo amin'ny fiainany.
Niresaka tamin'ny Global Voices i Sheikh tamin'ny fomba nahatontosana ny fananganana izany fisotroana kafe izany, nanangom-bola avy amin'ny fivarotana ny boky tantaram-piainany izy, ary ny hanampy ny ankizy eny an-dalambe no tanjona niriany.
“Nivarotra boky efa ho telo taona aho mba hanangonam-bola hanorenana ny fisotroana kafe. Misokatra foana ho an'ny ankizy eny an-dalambe izahay ary tsy mandà ny fidirany ao amin'ny fisotroana kafe, “hoy izy nanazava.
Manome sakafo sy zavatra isankarazany hafa tsy vidiana ho an'ny ankizy mahantra ny fisotroana kafe. Sary avy amin'ny: pejy FB Bombay to Barcelona . Nahazoana alàlana.
Ao amin'ny boky tantaram-piainany, ‘ Bombay Mumbai: Fiainana ny Fiainana : Toy Izaho Aho Noho Ianao “, izay nivoaka tamin'ny 2013, nanangona ny zavatra niainany hatramin'ny fahakeliny teny an-dalamben'i Mumbai i Sheikh ,nihira sy nangataka tao anaty lamasinina malaza tao an-toerana sy ny fikorontanana izay natrehany noho ny tsy fahampian'ny fanohanan'ny fianakaviana.
Ankehitriny, mampiasa ny vola niditra azo avy tamin'ny fivarotana boky izy nananganany ny fisotroana kafe.
“Nandositra niala tao an-trano aho teo amin'ny faha dimy taonako rehefa niatrika fihetsika maneho herisetra sy fandrahonana avy amin'ny raikeliko. Nivavaka aho ary natory tao amin'ny gara talohan'ny nahazoako trano fialofana – Sneha Sadan, “hoy i Sheikh.
Ary tapa-kevitra izy ankehitriny ny hanome toeram-pialofana sy fanohanana ho an'ny ankizy eny an-dalambe hafa. “Tsy tiako hiverina eny an-dalambe indray ireo ankizy ireo.”
Sary avy amin'ny pejy FB Bombay to Barcelona . Nahazoana alàlana
Nahalafo boky efa ho 12.000 dika mitovy amin'ny fiteny isan-karazany i Sheikh ao anatin'izany ny teny espaniola, Catalan, ary Marathi mba hanangonany vola hamatsiany ny fisotroana kafe.
Mpamaky iray avy any Espaina, Maria Antonia Perez, nitsidika an'i Mumbai vao haingana mba hanampy an'i Sheikh amin'ny fananganana ny fisotroana kafe rehefa avy namaky ny boky nosoratany.
“Manana latabatra napetraka manokana ao amin'ny fisotroana kafe miaraka amin'ny mofo sy ny sakafo maivana ho an'ny ankizy eny an-dalambe izahay. Tena tsara ny fijerin'izy ireo ity toerana ity , “hoy i Sheikh namintina.
Ity ny tantarany tao amin'ny YouTube nalain'ny Ditto TV:
Nanao horonantsary fohy tamin'ny boky sy ny fiainan'i Sheikh ihany koa ireo vondrona mpianatra fampitam-baovao ao Mumbai;
Ny ankamaroan'ny olona izay nitsidika ny fisotroana kafe dia nanana zavatra tsara holazaina momba izany tao amin'ny media sosialy.
Nanoratra tao amin'ny Facebook i Shivangini Singh
300 (ropia) monja ny vidin'ity boky ity -. Raha mividy iray ianao dia manampy an'i Amin Sheikh, ankizy mpirenireny teny an-dalambe teo aloha, hanorina fiainana tsara kokoa ho an'ireo hafa izay miaina eny an-dalambe.
Vao avy namaky azy io aho. Lalina ilay tantaram-piainana sy ny lalana nodiavina . Tena marina, tena tsara ary tena mampientanentana!
Toerana mafana sy tsara ny fisotroana kafe Bombay to Barcelona . 🙂 pic.twitter.com/y34kTQ7xAp
— sabari (@_sabari) 12 Septambra 2016
Nanoratra jery todika mamirapiratra tao amin'ny Facebook i Deanne Moraes :
Tsy mbola nahatsapa ho toy ny tany an-trano mihitsy aho raha nandeha tany amin'ny fisotroana kafe hafa nalehako teo aloha, tsy tahaka ny fitsidihako ny fisotroana kafe tao aminao…. Ny ambiansy, ny fanaingona, ny tsakitsaky … tonga lafatra ny zava-drehetra… .. Zavatra tsy hohadinoiko mihitsy ny fikarakarana ny mpanjifa … Manadino foana ny anaran'ny olona miasa ao amin'ny trano fisakafoana na ny fisotroana kafe aho kanefa ao amin'ny fisotroana kafe anao SAI, dia tsy adinoko ny fitiavanao mandray olona sy ny anaranao .. Mirary soa …